Beesha Cawrmale ayaa ah beel ka mid ah beel weeynta Warsangeli, | allsanaag
Beesha Cawrmale ayaa ah beel ka mid ah beel weeynta Warsangeli,
Beesha Cawrmale ayaa ah beel ka mid ah beel weeynta Warsangeli, deegaan ahaana degan gobolada Jubooyinka. Beesha Cawrmale ma ahan beel la gellin karo jiritaankooda mugdi, mana ahan beel maanta ka soo dhacday cirka oo ciddii doonto ay sheegan karto.
Dadka Soomaaliyeedna waa dad is wada yaqaan, mana jiro cid aan la aqoon dhalashadeeda iyo haybtooda toona. Waxaase ayaan darro ah, in beesha Cawrmale lagu sheego ineey yihiin beel Hawiye. Haddii beesha Cawrmale ay noqdaan Hawiye, Daaroodka oo dhana waxeey markaa wada noqonayaa dhammaantood beelo ka mid ah beesha Hawiye.
Hadaba, beesha Cawrmale waxeey u kalla baxaan:
Hadal iyo dhammaantiis, beesha Cawrmale waa beel ka mid ah beel weeynta Warsangeli cidii dood ka qabtana, hala xiriirto Saldanada Warsangeli si looga qanciyo shuushka ay dareemayaan, mugdigana looga saaro.
Muuqaalka hoose waxaad ku arki kartaan beesha Waladaye oo ka midka ah beesha Cawrmale oo nabadoon calleemo saareeysa. Suldaan iyo Nabadoon waa mid ay beesha Warsangeli ay leedahay, taas oo beesha cawrmalana ay maanta ku dhaqanto, meesha beesha Hawiyena ay ka leeyihiin malaaq iyo wabar.
Meeshan miyaad ku aragtaan malaaq iyo wabar la calleemo saarayo, mise waxaad ku aragtaa nabadoon la calleemo saarayo? Dadkan meesha nabadoonka lagu dooranayo fadhiyaa dhammaantood waa dad haddii aan laguu sheegin aad is oranyeeso waa dad jooga Dhahar iyo Badhan. Dadka meesha fadhiyaa meelna uguma eka beesha Hawiye.
← Previous Post Maamulka iyo bahda caafimaadka degmada Badhan →
2 thoughts on “Beesha Cawrmale ayaa ah beel ka mid ah beel weeynta Warsangeli,”
Abdi April 13, 2020 at 07:05
Anigoo ah nin ismaciil ah waligey ilaa iyo intaan yaraa waxaan ku soo barbaaray gobolada waqooyi iyagoo ay i dhaleen isaaq. Waligey maan maqal waxaad tahay qolo kale oo aan ka ahaayn Warsangeli waxaana kuu daliila Ah markii dagaaladu ka qarxeen hargaisa waxaa la isku soo ururiyey reero badan oo la rabay in laga saaro magaalada oo la geeyo dhankaas iyo bari. Dadkaas waxaa ku jirey ilaa 8reer oo Cawremale ah markaa dadkan Warsangeli sidaas bey u ogyihiin in ay beel weeynta Warsangeli muran gali Karin Ee dad baa ka baqaya in uu cawramale xoog ku yeesho kismaayo oo ay meesha ka muuqan waayaan madaama ay iyagu u barteen in ay qaataan duqa magaalada oo harti kale wax ka noqon. Mar dhowna waxaa ku xigta Dubeys Warsangeli maha hadii aan meel fog wax laga arag oo warsangeli iska garan dagaalka ku socda.
Dalmar April 13, 2020 at 07:18
Arin laga heshiiyey maba ahan in dib loogu laabto